Beesha Maalinguur oo Nacalad Dusha Kaga Tuurtay Jwxo-shiil iyo Kooxdiisa – Rasaasa News
Beesha Maalinguur oo Nacalad Dusha Kaga Tuurtay Jwxo-shiil iyo Kooxdiisa
Jun 4, 2011 Beesha Maalinguur oo Nacalad Dusha Kaga Tuurtay Jwxo-shiil iyo Kooxdiisa
Shir ay khadka Telefoonka ku yeesheen todobada dab ee ay ka kooban tahay mugweynta beesha Maalinguur, oo dhacay bishan June 1, 2011 ayay nacalad tusha kaga tuuray kooxda Jwxo-shiil, oo iyadu si xun u ugaadhsata dhalinyarada beesha.
Beesha oo warbixin iyo talo isku waydaarsatay khadka telefoonka, ayaa waxay istustay in gabalka Nogob, oo ka mid ah gabalada ay beeshu dagto uu u baahan yahay in la wacyi galiyo dadka.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxay gabaad ka dhigataa dhalinyarada u dhalatay guud ahaan gabalka Nogob, arintaas oo keentay in dhalinyaro badan lagu dilo gabalka.
Kooxda ayaa waxay dhacdaa xoolaha dadweynaha gabalka degan, maadama ayna dadka gabalka degan helin wacyi galin ku saabsan in ay iska celiyaan budhcada Jwxo-shiil, ee dhabka ka haraatiday halgankii ay beeshu hormuudka ka ahayd.
Beeshu waxay si gaar ah u magac dhawday in Ina-dhuubo, Abdti-doon, Qaaxo iyo Jwxo-shiil, oo ay beelahoodu nabad yihiin in ay si gaar ah beesha u bartilmaameedsadeen.
Cabdulahi dheer, waxaa uu ahaa hantiile halyey ah oo ka dhashay beesha Maalinguur, waxaana bishii December 2010, si xaqdaro ah ugu dishay dalka Kenya kooxda Jwxo-shiil, beeshuna arintaas way is xasuusisay.
Dhinaca kale beeshu waxay aad uga hadashay horumar la,aanta ka jirta gabalka Nogob in ay aad u saamaysnayso nolosha dadweynaha gabalka Nogob.
Waxayna is tustay beeshu in uu gabalku u baahan yahay waxa u qabasho dhab ah, taas oo waajibka ugu horeeyaa uu saaran yahay dadka qurba joogta ah ee u dhashay gabalka Nogob.
Waxaa kale oo ay beeshu istustay in dawlada degaanka Somalida uu xil balaadhan ka saaran yahay horumarinta gabalka Nogob, oo isagu ah gabalka ugu dambeeya xaga horumarinta.
Masuul ka mid dadka ka qayb qaatay kulanka Telefoonka, ayaa yidhi cudur, colaad iyo gaajaba waxaa Aabe u ah horumar la,aanta waana mid ay kaga faa,iidaysanayso gabalka kooxda Jwxo-shiil.
Beeshu waxay si wada jir ah u cambaaraysay werarkii Goljano, oo ay markale jug ku gaadhay beesha, ka dib kolkii la dilay 52 dhalinyaro ah oo ka dhalinyarda uu Jwxo-shiil, maskaxda ka xaday.
Beesha ayaa gabgabadii isku raacda qodobo dhawra;
1. In laga shaqeeyo sidii lagu badbaadin lahaa dhalinyarada ay ka soo jeeda gabalka Nogob ee ay shidhaysanayso kooxda Jwxo-shiil.
2. In laga shaqeeyo sidii ay dawlada degaanku u horumarin lahayd degmooyinka uu ka kooban yahay gabalka Nogob.
3. In la wacyi galiyo dhamaan dadka dibada joogta iyo dadka gudaha jooga ee u dhashay gabalka Nogob, sidii ay uga shaqayn lahaayeen nabada iyo horumarka gabalka.
4. In la qabto kulan balaadhan oo ay ka wada qayb galayaan guud ahaan waxgaradka u dhashay gabalka Nogob, si la isu waydiiyo waxa ku qabtay dadweynaha degan gabalka Nogob dilka iyo dib u dhaca.
Gabalka Nogob iyo gabalka Qoraxeeya waa labada gabal ee ay kooxda Jwxo-shiil, dhufayska ka dhigatay. Dadwenaha gabalka Qoraxeey kooxda Jwxo-shiil, xoog bay iskaga rartay, Nogobna dadkeeda ayuu waajib ka saaran yahay badbaadinta dhalinyaradeeda.
Imtixaanka Sanad Dugsiyeedka 2011, oo Degaanka Somalida ka Socda